MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 3
>politics art and politicians
မင်းကိုနိုင် - အိုးဝေလို့ ထ တွန်တဲ့ နေ့
>၂၀၀၈ူမန်မာူပည်မြာ ရန် ၅ ပၝး မဵားဆဲူဖစ်မည် ဟုဆို
>Yin Yin Hmwe - What have I done wrong ?
ဆောင်းယွန်းလ - မွေးနေ့
ဘော်စတွန်ဗုံးခွဲသူအဖြစ် သံသယရှိသူတဦးကို MIT ကျောင်းဝင်း၊ ၀ါတားတောင်းမြို့နယ်မှာ ဖမ်းမိဟုဆို
>Letters from Michigan - 62
>Cyclone Giri affected 70 thousand homes and 200 thousand people - Reports told
စန္ဒာမော် ● ဝေးခဲ့ရပြန်တဲ့ ပန်းခရမ်းပြာသို့ ဦးညွတ်ခြင်း (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၁၊ ၂၀၁၈ ကြည်ပြာကန်နံဘေးက တေးချစ်သူပရိသတ်ကို အနှစ်သာရအပြည့်ပါတဲ့ တေးဂီတတွေနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ ကမ်းမဲ့ပန်းဗေဒါတစ်ဆုပ်။ တည်ရာမှီရာတွေကို စွန့်လို့ မျောလို့နေခဲ့တဲ့ ပန်းခရမ်းပြာလေးတစ်ဖွဲ့ဟာ လောက နိယာမအရ ကမ်းနဲ့ တစ်ပွင့်ပြီးတစ်ပွင့် မရှေးမနှောင်း ဝေးဝေးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ ခုတစ်ခါ လက်ကျန်ပန်းဗေဒါတစ်ပွင့်လည်း လက်ပြ နှုတ်ဆက်လို့ ကမ်းနဲ့ဝေးရာကို မျောလွင့်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြန်ပါပြီ။ ဝေးခဲ့ပြီပန်းခရမ်းပြာ၊ အရွယ်လွန်ရွေ့လျား၊ သဇင်ည၊ နဒီမင်္ဂလာ၊ နှလုံးသားစွမ်းအား၊ တို့ရင်ထဲ၊ အချစ်စစ် စတဲ့ သီချင်းတွေကို ရေးစပ်သီကုံးခဲ့ပြီး ပရိသတ်ရဲ့ နှလုံးသားထဲက ကြိုးတွေကို အသံထွက်အောင်တီးခတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကိုရဲလွင် (ခေါ်) ဦးရဲလွင်ကြီး တစ်ယောက် ဒီကနေ့မှာပဲ သူချစ်တဲ့ တေးသီချင်းတွေ၊ သူချစ်တဲ့...
ကိုသန်းလွင် ● ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၁၊ ၂၀၁၈ (၁) လွန်ခဲ့သောလက ဘေဂျင်းသို့ ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ဘေဂျင်းမြို့သို့ရောက်လျင် ဂူးဂဲလ်၊ ဖေ့ဘွတ်နှင့် အူဘာ (Google, Facebook, Uber) တို့ကိုသုံး၍မရနိုင်ကြောင်း သိပါသည်။ ကျွန်တော်သည် အပြင်မှာသုံးစွဲရသည့်အရာများ တရုတ်ပြည်မှာ မရနိုင်ဆိုခြင်းမှာထူးဆန်းနေသည်။ တရုတ်တို့ကစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ဟန် မတူ၊ သူတို့သည်သူတို့နိုင်ငံမှလုပ်သည့် Baidu ကို ဂူဂဲလ်အစားနှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာအတွက် “Wechat” သုံးမည်။ တက္ကစီငှားလိုပါလျင် “Didi” ကိုသုံးမည်၊ သတင်းတွေဖတ်လိုလျင် Toutiao ကို သုံးမည်။ ဘေဂျင်းတွင်လုပ်သမျှကို အစိုးရက စောင့်ကြည့်နေမည်ဆိုခြင်းကို သိပါ သည်။ ဤအလုပ်ကို သာမန်ဖြစ်သော လုပ်နေကျ အလုပ်တခုသဖွယ် သဘောထားကြပါသည်။ (၂) တရုတ်အစိုးရအနေဖြင့် သူတို့နိုင်ငံသားများအတွက် မိမိကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်...
နိုလှိုင်း – ပန်းရဲ့လမ်း
ပန်းရဲ့လမ်း နိုလှိုင်း (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၈ ဒီ​နေ့ဟာ ဒီည​နေဟာ ဒီအခိုက်​အတန့်​ဟာ ​လေထုထဲ စိုထိုင်းဆသာ တစစမြင့်​လာမယ်​ ​မျှော်​လင့်​ချက်​ဟာ တ​ဖြေး​ဖြေး တုန်​ရီ​ဖျော့​တော့​​နေမယ်​ ​ရှေးဦးစွာ ဦးညွတ်​လိုက်​ပါရဲ့ ဒီခဏတာ ဒီ​လေးနာရီဆယ်​မိနစ်​ဟာ မိုး​ရေနဲ့ လှမ်းလှမ်းချိတ်​​နေရတဲ့ အား​လျော့ခြင်း​တွေပါပဲ တ​ငွေ့​ငွေ့ကျွမ်း​​လောင်​နေတယ်​ တ​မြေ့​မြေ့ ​အေးစက်​​နေ​လေရဲ့ မိုးဟာ တစက်​စက်​တိတ်​ဆိတ်​စွာ ​စွတ်​စို ​ကြေကွဲဖွယ်​ရွာ​နေ​လေရဲ့။ အဲဒီအချိန်​ အဲဒီ​နေ့က ဘာ​ကြောင့်​များ အဲဒီ​လောက်​​တောင်​မိုး​တွေစွေ​ရတာလဲ ​မေးလို့ ဘာ​ကြောင့်​များ ​ဆွေးရိပ်​ဟာ တစိမ့်​စိမ့်​ ​ဆွေးလို့ ဘာ​ကြောင့်​များ မိုးရွာ​နေလျက်​​ လမ်းမဟာသွေ့​ခြောက်​​နေရတာလဲ ဘာ​ကြောင့်​များ မိုးစက်​​တွေဟာ အလွမ်းသံပါ​နေရတာလဲ ဘယ်​ကီးနဲ့ပဲ ရွာရွာ ဒီမှာ ကံမကုန်​​သေးလို့ပါ ကျုံး​အော်​​နေရ ဒီမှာ ပြန်​ဆုံကြမယ်​ဆိုတာ​ပြောရုံရှိ​သေး မိုးသား​တွေပဲ ညို့ညို့တက်​လာတယ်​...
ကာတွန်း ATH ရဲ့ နေဝင်ညကို ကူးခတ်သွားသူ … (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၁၊ ၂၀၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း ညီပုချေ – ငါ့ ဒီမိုကရေစီ
ကာတွန်း ညီပုချေ – ငါ့ ဒီမိုကရေစီ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၁၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ညီပုချေ Related posts ကာတွန်း ညီထွေး – ခေတ်သစ် ဝေါဟာရများ (0) ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းနေသူတွေ … (0) ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ လေထဲပျောက်ကုန်ပါဦးမယ်ကွာ …. (0) ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ တွေ့ပြီပေါ့ကွာ … (0) ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ အတိုးနည်းအိမ်ယာမဟုတ်ရပါ (0)
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း(သချာင်္) – ဒီမိုကရေစီစနစ်များ ကျဆုံးခြင်းအကြောင်းများ – နိဒါန်း
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း(သချာင်္) – ဒီမိုကရေစီစနစ်များ ကျဆုံးခြင်းအကြောင်းများ – နိဒါန်း (မိုးမခဘာသာပြန်အခန်းဆက်) ဇူလိုင် ၁၁၊ ၂၀၁၈ Steven lovitsky နှင့် Danial Ziblatt တို့ရေးသားသော How DEMOCRACIES Die စာအုပ်နိဒါန်းကို ဘာသာပြန်သည်။ စတီဗင်လီဘစ်စကီနှင့် ဒယ်နီယယ်ဇိဘလပ် တို့သည် ဟာဘတ်တက္ကသိုလ် (Harvard University) မှ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပါမောက္ခများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သည် နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်ကျော်အတွင်း ဥရောပတိုက်နှင့် လက်တင်အမေရိကန်နိုင်ငံများ တွင် ဒီမိုကရေစီစနစ်များကျဆုံးသည့် အဖြစ်အပျက်များကို လေံလာခဲ့ကြသည်။ ထိုပါမောက္ခနှစ်ဦး၏တွေ့ရှိချက်အရ ဒီမိုကရေစီစနစ်များကျဆုံးခြင်းမှာ စစ်တပ်မှအာဏာသိမ်းခြင်းကြောင့် မဟုတ်။ စစ်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးများ ကြောင့်မဟုတ်။ ၄င်းသည် တဖြေးဖြေး ယိုယွင်းပျက်စီးလာခြင်းများကြောင့် ဖြစ် သည်။ ယိုယွင်းပျက်စီးလာသောအရာများမှာ တရားရေးရာကိစ္စများ၊ ပုံနှိပ်ခြင်း မီဒီယာများနှင့် ခိုင်မာစွာရပ်တည်ခဲ့သော...
မောင်အောင်မွန် – ကိုယ်တွေ့7July 1962 ကျွန်တော်တွေးမိသလိုရေးပါမည် (၃၄၄) (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၁၊ ၂၀၁၈ (၁) ကျွန်တော်သည် သတင်းသမား (Professional News Writer) အဖြစ်ခံယူထားသူမို့ ဤဆောင်းပါးပါ အချက်အလက် တစ်ခုမကျန် မှန်ကန်ကြောင်း တာဝန်ခံပါ၏။ စဟေ့ဆိုကတည်း ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့် မမှန်မကန်မတိမကျ သတင်းများ စတင်ခဲ့ကြရာ– ကြာလေကြာလေ အမှန်နှင့်ဝေးလေ၊ ထင်ကြေးနှင့်ရေးသားမှု အမုန်းဒေါသ– စသည်တို့က လွှမ်းမိုးလာခဲ့သည်။ (၅၆)နှစ်ကြာလာသောအခါ ဘယ်အခြေရောက်နေပြီဆိုသည်ကို စာဖတ်သူတို့ စဉ်းစားကြည့်ကြပါကုန်။ (၂) ၁၉၅၃ ခု၊ ဇွန်လတွင် ကျွန်တော်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရောက်၏။ နေခွင့်ရသည့် သထုံဆောင်ရှေ့ ကျောင်းလမ်းကအထွက် ညာဘက်ရှိ အားကစားရုံဘေးက (၅)မိနစ် လျှောက်သွားလျှင် တကသ အဆောက်အအုံသို့ရောက်သည်။ ထိုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွါးသည့်...
ကိုသန်းလွင် – ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲ
Representational Image (Photo: Getty Images) ကိုသန်းလွင် – ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၁၊ ၂၀၁၈ (၁) လွန်ခဲ့သောလက ဘေဂျင်းသို့ ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပါသည်၊ ဘေဂျင်းမြို့သို့ရောက်လျင် ဂူးဂဲလ်၊ ဖေ့ဘွတ်၊ နှင့် အူဘာ (Google, Facebook, Uber ) တို့ကိုသုံး၍ မရနိုင်ကြောင်း သိပါသည်၊ ကျွန်တော်သည် အပြင်မှာ သုံးစွဲ ရသည့်အရာများ တရုတ်ပြည်မှာ မရနိုင်ဆိုခြင်းမှာထူးဆန်းနေသည်၊ တရုတ်တို့ကစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ဟန် မတူ၊ သူတို့သည်သူတို့နိုင်ငံမှလုပ်သည့် Baidu ကို ဂူဂဲလ်အစားနှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာအတွက် “Wechat “ သုံးမည်၊ တက္ကစီငှားလိုပါလျင် “Didi” ကိုသုံးမည်၊ သတင်းတွေဖတ်လိုလျင် Toutiao ကိုသုံးမည်၊ ဘေဂျင်းတွင်လုပ်သမျှ ကို အစိုးရက စောင့်ကြည့်နေမည်ဆိုခြင်းကိုသိပါသည်၊ ဤအလုပ်ကို...
ကျော်ဟုန်း – ပန်းရဲ့လမ်းသခင်
ကျော်ဟုန်း – ပန်းရဲ့လမ်းသခင် (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၁၊ ၂၀၁၈ ဝတ်မှုံကူးလို့ ပန်းတခင်းဖြစ်စေသူ။ သင်းပျံ့ရနံတွေကို ကမ္ဘာပတ်လမ်းထဲ ပို့ချင်သူ။ သူတောင်းတတာ ချိုးဖြူငှက်တို့ ပန်းခင်းထဲမှာ တေးဆိုပျော်ပါးဖို့ အချင်းအရာ။ မှန်သောအယူဝါဒနဲ့ အလှတရားက်ို ဖမ်းဆုပ် ခိုင်ကျည်ကျည် ဝါဒနဲ့ ယုံကြည်မှု သစ္စာမြဲ နောက်မတွန့်ဘဲ နွေနေရောင်ကို အံ့တုရဲတဲ့ နေကြာပန်း။ ဓမ္မတာလမ်းကို ဓမ္မဖျန်းလို့ သွားရဲဖို့လည်း ပြင်ထားသမို့ ဘဝ အဆက်ဆက် နိဗ္ဗာန် မဖက်ခင်တိုင် သူခင်းတဲ့ ပန်းလမ်း သူနင်းပြီး လိုရာပြည့်စေ အတုယူ ဂုဏ်ပြုရင်း ပန်းရဲ့လမ်းမျှော် ဦးညွတ်ပါတယ် ဦးရဲလွင်။ ။ ကျော်ဟုန်း ၂၀၁၈၀၇၁၀ Tags: ကိုရဲလွင်, ချင်း Related posts မဇ္ဈိမလှိုင်းဝိုင်းတော်သားကြီး...
(photo – ဝေချစ်ကို (သော်ဒီဝေ) မဇ္ဈိမလှိုင်းဝိုင်းတော်သားကြီး တေးရေးတေးဆို ဂီတပညာရှင် ကိုရဲလွင် ကွယ်လွန် K (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၁၊ ၂၀၁၈ ပန်းရဲ့လမ်းတို့ဖခင်ကြီး ဂီတပညာရှင် ကိုရဲလွင်ဟာ ရန်ကုန်မြို့ရန်ကုန်ဆေးရုံသစ်ကြီး ကုတင် ၅၀၀ ဆေးရုံမှာ အသည်း ရောဂါကုသနေရာမှ ယနေ့ဇူလိုင် ၁၀ရက် ညနေ ၄နာရီ ၁၀မိနစ်မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကိုရဲလွင်ကို အဖ စက်ရှင်တရားသူကြီး ဦးမောင်မောင်၊ အမိဒေါ်ကြိုင်တို့မှ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ပေါင်းတည်မြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ မောင်နှမ ၁၀ ဦးတွင် အကြီးဆုံးသား ဖြစ်။ ကိုးတန်းကျောင်းသားဘ၀ အလုံ အထက(၄)မှာ ပညာသင်ကြားစဉ် ငယ်သူငယ်ချင်းများမှာ ရုပ်ရှင်မင်းသား ကျော်ဟိန်း၊ တေးရေးတေးဆို ပန်းချီဆရာ ခင်ဝမ်းတို့ဖြစ်။...
ပန်းချီ Zun Ei Phyu ရဲ့Colors and Emotions Solo Exhibitionအမည်ရတဲ့ပန်းချီပြပွဲ
ပန်းချီ Zun Ei Phyu ရဲ့Colors and Emotions Solo Exhibitionအမည်ရတဲ့ပန်းချီပြပွဲ K (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၁၊ ၂၀၁၈ ပန်းချီ Zun Ei Phyuရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ် တကိုယ်တော် Colors and Emotions Solo Exhibition အမည်ရတဲ့ပန်းချီပြပွဲကို ရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြိှု့နယ် အောင်ဆန်းကွင်းမြောက်ဘက်တိုက်တန်း အမှတ်၂၃ ရှိ Ok Art Gallery မှာ ဇူလိုင် ၁၁ ရက်နေ့မှ ဇူလိုင် ၁၃ ရက်ထိ ပြသသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ ပြပွဲပြသရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပန်းချီ Zun Ei Phyuက “ ပန်းချီကားတွေဖန်တီးရာမှာ အကြောင်းအရာ ရှာဖွေစမ်းသပ်မှုတွေ နဲ့ ရသတခုပေးတဲ့ကားတွေဖန်းတီးချင်တဲ့စိတ် ဒီနှစ်အတွင်းဖြစ်နေခဲ့တယ်။ စိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်...
ဒီလူည ● ဆင်ရုပ်ပုံရေးဆွဲသူ
ဒီလူည ● ဆင်ရုပ်ပုံရေးဆွဲသူ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၀၊ ၂၀၁၈ ခု ပြောမယ့်အကြောင်းက ကျနော့်အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ ကျနော့်သူငယ်ချင်း တယောက်ရဲ့ကြောင်း။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ ကျ နော်က တထောင့်တနေရာက ပါဝင်ခဲ့ရုံလောက်ပါပဲ။ ဒီထက်လည်း မပိုခဲ့ပါဘူး။ ပိုပြီးပါဝင်ဖို့လည်း မဖြစ်နိုင်တဲ့ အနေအထား မျိုးပါ။ ကျနော့်သူငယ်ချင်းရဲ့ နာမည်က မြင့်သူအောင်။ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့သူတယောက်အဖြစ် အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းလာစေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး သူ့ရဲ့မိဘတွေက သူ့ကို အဲ့ဒီနာမည်ပေးခဲ့တာလို့ ကျနော့်ကို ပြောပြဖူးတယ်။ နာမည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီလိုမှတ်ချက် မျိုးကိုလည်း မကြိုက်ကြောင်း ကျနော့်ကို သူပြောပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါဟာ ကျနော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပြောလေ့ပြောထများတဲ့ စကားတခုလိုတော့ ဖြစ်နေမလား မသိဘူး။ “ပညတ်သွားရာ ဓါတ်သက်ပါ” ဆိုတာမျိုးလေ။ ဒီစကားရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို ခရေစေ့ တွင်းကျ ဖွင့်ဆိုပြဖို့လောက်ထိတော့ ကျနော်...
ဆောင်းယွန်းလ ● ငြီးငွေ့မှုကို အငွေ့ပျောက်ရှုရှိုက်မိသောနေ့များ
ဆောင်းယွန်းလ ● ငြီးငွေ့မှုကို အငွေ့ပျောက်ရှုရှိုက်မိသောနေ့များ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၀၊ ၂၀၁၈ ပျင်းပျင်းရှိ ငြီးငွေ့စရာ စကားလုံးတွေကို တရွက်ချင်းလှန်ဖတ်ဖို့လည်း မလိုတော့ဘူး အထက်အောက် အလိုလိုစီးဆင်းသွားတယ် သေနေတဲ့ မြစ်ကြီးနဲ့ ရပ်တန့်နေတဲ့ပင်လယ် ရွေ့နေတယ်လို့တော့ ပြောကြတာပါပဲ ရေသေမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် မော်တော်ယာဉ်စီး ခရီးမရောက် လက်ဖျောက်တီးရင်း ဆုဆိပ်ကြီးတွေကို မျှော်လင့်ကြ အခင်းဖြစ်ပွားရာနဲ့သတင်းဖြစ်ပွားရာနေရာက သပ်သပ်စီ ယုံကြည်မှုကိုစာစီနေကြရင်း ညဟာ အဖြောင့်မသွားတော့တာ ကြာပြီ နာရီတွေလည်း ပုံသေနည်းဆန်ဆန် ကုန်လွန်သွားခဲ့ အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းဟာ ငဲ့ကွက်ရမဲ့ အရေးပဲတဲ့ အရေးထဲမှာ အရာပေါ်နေလို့ အရာရာဟာ ကောက်ကောက်ကွေ့ ကွေ့နောက်ထပ် နေ့ပေါင်းများစွာမှာ ငြီးငွေ့မှုတွေနဲ့ အပျင်းဖြေနေရခြင်းများ ခြောက်သွေ့တိုင်း နွေကိုပုံချလို့မရ ကောက်ကွေ့တိုင်းလည်း...
ကိုသစ် (သီတဂူ) ● မုန်တိုင်းထဲက ဖယောင်းတိုင် – အပိုင်း (၁၅)
ကိုသစ် (သီတဂူ) ● မုန်တိုင်းထဲက ဖယောင်းတိုင် – အပိုင်း (၁၅) (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁ဝ၊ ၂ဝ၁၈ တိဗက်မြေပေါ် မော်စီတုန်း၏ တပည့်များရောက်လာပြီးနောက် ရေခဲတောင်ကြီးတွေက အရင်လို အေးအေးမြမြ မရှိကြတော့။ အေးချမ်းသောအသိုက်အမြုံကလေးရှိရာသို့ မုန်တိုင်းဝင်ရောက်ခဲ့လေပြီ။ အရင်တုန်းကတော့ သည်မြေသည်ရေမှာ အပူ အပင်ဆိုတာ မရှိ။ စိုးရိမ်ခြင်းကင်းစွာဖြင့် ရှင်သန်လှုပ်ရှားခဲ့ကြဘူးသည်။ အခုတော့ အရင်လို မဟုတ်တော့ပြီ။ တရုတ်ပြည် က စစ်သားတွေ တိဗက်ဒေသကို ဝင်ရောက်လာပြီးနောက် မကြာခင်ကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲမှာ အစားအသောက်ပြဿနာ ပင်ဖြစ်သည်။ ဆရာကြီးမော်စီတုန်း၏ တပည့်တွေက အစားသောင်းကျန်းပါသည်။ တိဗက်လူမျိုးများသည် သတ္တဝါ ကလေးများအပေါ် ကြင်နာသနား ကရုဏာတရား ကြီးမားကြသူများ ဖြစ်သည်။ တရုတ်စစ်သားများက သူတို့အမြတ် တနိုးထားသည့် ကြက် ဝက်...
ကာတွန်း ဘီရုမာရဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တု ထုမလို့ …
ကာတွန်း ဘီရုမာရဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တု ထုမလို့ … (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၀၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
တည်ဘွားဦး – ကိုယ်တို့ကမ္ဘာ
ကိုယ်တို့ကမ္ဘာ တည်ဘွားဦး (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၀၊ ၂၀၁၈ ဆင်းရဲသားတွေက တွင်းနက်နက်ထဲကနေပြီး ကယ်ကြပါ ကယ်ကြပါလို့ တစာစာအော်နေကြပေမယ့် သူဌေးသားတွေက လေယာဉ်ပျံပြောင်းပြန်စီးဖို့ ကြံရွယ်နေကြတယ် ကိုယ်တို့ကမ္ဘာက ပျော်စရာကောင်းလို့လား အရည်တွေပျော်ကုန်ပါပြီ ကိုယ်တို့ကမ္ဘာဟာ ကိုယ်တို့သောက်သမျှအရာရာဟာ ချိုလုိ့နေတော့တာ ။ ။ No tags for this post. Related posts No related posts.
ခင်မျိုးချစ် ● လိုတရမယ်ဆိုရင် (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၉၊ ၂၀၁၈ Stories and Sketches of Myanmar ထဲမှ MakeaWish ဆောင်းပါးကို ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သင်္ချာ) က ဘာသာပြန်သည်။ အကယ်၍များ နတ်သမီးပုံပြင်များထဲကကဲ့သို့ အရင်ဘဝက အမေဖြစ်ခဲ့ဖူးသော နတ်သမီးကပေါ်လာပြီး ”ဘာလိုချင်သလဲ လို ချင်တာရစေရမယ်” ဟုပြောခဲ့လျှင် ကျွန်မက ဘာဆုတောင်းရမယ်ဆိုတာကို သိပါတယ်။ ”အို…လိုတရနတ်သမီး ကျွန်မလိုချင်တာပြောရရင် အိမ်မှာ ရှိတဲ့အခန်းတိုင်းရဲ့ထောင့်တိုင်းမှာ ဖုန်တွေအလိမ်းလိမ်းနဲ့စက္ကူစုတ် တွေ ရှုပ်ပွနေပြီး ပိုးအိမ်တွေကလည်း ပြည့်နေပါစေ။ နောက်ပြီး မီးဖိုထဲမှာလည်း ဆေးစရာပန်းကန်တွေတောင်လိုပုံနေပါစေ။ ဒါတွေမကသေးဘူး။ မတိုက်ရသေးတဲ့ အိုးတွေ၊ ဒယ်အိုးတွေကလည်း ပြည့်နေပါစေ။ အချုပ်ပြောရရင် ချက်ချင်းလုပ် ရမည့်...
ကာတွန်း ဆွေသားရဲ့ အဆင့်မြင့် ဘယာကြော်တွေ ရမယ် …
ကာတွန်း ဆွေသားရဲ့ အဆင့်မြင့် ဘယာကြော်တွေ ရမယ် … (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၉၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ဆွေသား Related posts ကာတွန်းဆွေသား ● အစည်းအဝေး စနေပြီ (0) ကာတွန်း ဆွေသားရဲ့ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးပဲ့ကိုင်ရှင်ကြီး (0) ကာတွန်း ဆွေသားရဲ့ ယောင်နေသူတွေ … (0) ကာတွန်း ဆွေသားရဲ့ တရားစောင့်နတ် (0) ကာတွန်း ဆွေသား ● ငြိမ်းချမ်းရေးတဲ့ (0)
လှကျော်ဇော ● တရုတ်ပြည်က ပေးစာတစောင် (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၉၊ ၂၀၁၈ အခုတလော တရုတ်ရုပ်မြင်သံကြား ဗဟိုအမှတ် (၁) က တရုတ်ပြည်ကပေးစာ ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ နိုင်ငံရေးပညာပေးအစီအ စဉ်အဖြစ် အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ ပြည်တွင်းက နာမည်ကျော်ခေါင်းဆောင်တွေ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ တော်လှန်ရေး အတွင်း နေရာအသီးသီးကကျဆုံးသွားသူ၊ စတာ စတာတွေအပြင် သာမန်အညတြရဲဘော်များသာမက အခုခေတ်တိုင်းပြည် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း ကျဆုံးသူများ (သို့မဟုတ်) ထမ်းဆောင်ဆဲသာမန်ဝန်ထမ်းများ (ဥပမာ-ကုလငြိမ်းချမ်းရေးစောင့် တပ်သားများ၊ အာဖရိကတိုင်းပြည်များသို့ စေလွှတ်ခံရတဲ့ဆေးဝန်ထမ်းများ) ရဲ့တိုင်းပြည်အပေါ်ထားရှိတဲ့ သူတို့တတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ တာဝန်ယူမှုတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့ပေးစာများအကြောင်းပါ။ အတော်လူကြိုက်များနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လူငယ်လူရွယ်များအတွက် တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စိတ်ဓာတ်တွေ သွင်းပေးတဲ့အစီအစဉ်လည်း ဖြစ်ဟန်ရှိပါတယ်။ ထုတ်လုပ်သူများဟာ ဒီအစီအစဉ်ကို အတော်ဂရုစိုက် ပြင်ဆင်ထားပုံရပါတယ်။ အတော်စိတ်ထိခိုက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့စာများ (ဥပမာ – ကူမင်တန်ခေတ်အဖမ်းခံရပြီး...
ဇင်လင်း ● တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် ပြဿနာ ရိုးသား ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးကြချိန်တန်ပြီ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၉၊ ၂ဝ၁၈ မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စသည် တနေ့ရွှေ တနေ့ငွေဖြစ်နေသည်။ မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည် ပေါ်လာလိုက် ပျောက် သွားလိုက်ဖြစ်နေသည်။ သာမန်ပြည်သူတို့အဖို့ စိတ်မောစရာမျှသာ ဖြစ်သော်လည်း တောတောင်များအတွင်း စစ်ရှောင် စခန်းများတွင် နေထိုင်စောင့်စားနေကြရသော ဒုက္ခသည်များအဖို့စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ဆင်းရဲပင်ပမ်းနေကြရသည်။ စစ်ရှောင် စခန်းများတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များဆိုလျှင် စားရေရိက္ခာမလုံလောက်မှုနှင့် ဆေးဝါးပြတ်လပ်မှုများကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးမှုများပင် ရှိနေသည်။ အခြားတဖက်တွင်လည်း နှစ်ဖက်စလုံး စစ်ပွဲတွင်ပါဝင်နေရသည့် စစ်ဗိုလ် စစ်သားများ သေကြေဒဏ်ရာရမှုများ အလွန်များပြားနေပြီဖြစ်သည်။ ရံဖန်ရံခါ သတင်းစာ နာရေးကြော်ငြာများတွင် တိုင်းပြည်အတွက် အသက်ပေးလှူသွားသော သတင်းများတွေ့ရသည့်အခါ လွန်စွာ စိတ်မသက်မသာဖြစ်ရသည်။ သက်ဆိုင်သူမိသားစုဝင်များ ဆိုလျှင်...
ရာမိုးဇင် ● ရပ်ကွက်ထဲက ကြယ်တွေရဲ့စကား
ရာမိုးဇင် ● ရပ်ကွက်ထဲက ကြယ်တွေရဲ့စကား (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၉၊ ၂၀၁၈ ညဟာ ဝမ်းမီးတောက်နေတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ အမှောင်ထုကို စိုက်ကြည့်နေတယ်။ ရွာရိုးကိုးပေါက်မှာ ကြယ်ပွင့်တချို့တလေ လင်းပွင့် မျိုးစေ့မမှန်တဲ့ကောင်းကင်ကို ဆွဲဖွင့်ပစ်ဖို့ ငါတို့မိသားစုတခုလုံး စကားတွေ ဆွံ့အ ကိုယ်စီကိုယ်ငှ မျက်ရည်ပူတွေကျလို့။ ညီလေးရေ… … … “ဝမ်းမီးမငြိမ်းသေးဘူး” တဲ့ အမေက အဖေ့ကို တီးတိုးပြောလိုက်တယ် မင်းကြားရဲ့လား တကယ်ဆိုရင် ငါတို့ ခွန်အားနဲ့ ရှာဖွေရုန်းကန်ခဲ့သမျှ အနာဂတ်အသေနေ့တွေထဲမှာ နေ့လွဲ ညစာ… … ညလွဲ နေ့စာ။ ။ ရာမိုးဇင် ၂၅၊ ၆၊ ၂၀၁၅ Tags: ရာမိုးဇင် Related posts ရာမိုးဇင် ● လေချွန်ပြီး...
ကျွန်ုပ်တို့ အသက်ရှူသွင်းသည့်အခါ လေပမာဏ ဘယ်လောက်ရှူသလဲ ဂျူနီယာဝင်း၊ စွယ်စုံကျမ်းမိတ်ဆက်၊ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၉ ၊ ၂၀၁၈ ကျွန်ုပ်တို့ တစ်မိနစ်ကို ၁၅ ခါ ( သို့မဟုတ် ) အခါ ၂၀ ပျှမ်းမျှ လေကို ရှူသွင်းပါသည်။ သည်တော့ တစ်နေ့ကို အကြိမ်ပေါင်း ၂၁၀၀၀၀ (နှစ်သောင်းတစ်ထောင်) ကနေ ၂၈၀၀၀ ( နှစ်သောင်းရှစ်ထောင်) ရှူပါ သည်။ ယင်းသည် တစ်မိနစ်ကို ၇.၅ သန်းကနေ သန်းပေါင်း ၁၀ သန်း အကြိမ်နဲ့ ညီမျှပါသည်။ တစ်နေ့ကို လေပမာဏ ၁၅၀၀၀ (တစ်သောင်းငါးထောင်) လီတာ ရှူသွင်းပါသည်။ သည်တော့ တစ်နှစ်ကို လီတာပေါင်း ၅သန်းခွဲလောက် ရှူသည်ဟု...
သုညဒီဂရီအောက်မှာ တစ်ပတ်တာ အမည်ရတဲ့ ခရီးသွားစာပေ အမျိုးအစားစာအုပ်သစ်ထွက်ရှိ
သုညဒီဂရီအောက်မှာ တစ်ပတ်တာ အမည်ရတဲ့ ခရီးသွားစာပေ အမျိုးအစားစာအုပ်သစ်ထွက်ရှိ K (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၉ ၊ ၂၀၁၈ စာရေးဆရာ လင်းဆက်ငြိမ်းချမ်းနဲ့ နေဇင်ထွန်းတို့ရေးသားတဲ့ သုညဒီဂရီအောက်မှာ တစ်ပတ်တာ(ဘေကျင်း၊ ဟန်ကျိုး၊ ရှန် ဟိုင်း) အမည်ရတဲ့ ခရီးသွားစာပေဆောင်းပါးများ စုစည်းမှုစာအုပ် ဇွန်လအတွင်းမှာ ထွက်ရှိလာပါတယ်။ ယခုစာအုပ်မှာ စာရေးဆရာလင်းဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးသားတဲ့ ပျံသန်းခဲ့သောတစ်ရက်တာ၊ သိသလောက်ဘေကျင်း ဖြတ်ခနဲ ဘေကျင်း၊ အရှိန်ပြင်းပြင်း ဟန်ကျိုသို့နှင်၊ ဟန်ကျို၏နှလုံးသည်းပွတ်(သို့မဟုတ်)West Lake)၊ ဘုရားမြေ တရားမြေ လင် ယင်၊ စုန့်ခေတ်ရောက်သွားသော ၂၁ရာစုလူသား၊ Xi Xi ပျော်ဝင်ခြင်း၊ Dream Town(သို့မဟုတ်) အိပ်မက်တို့စံပျော်ရာ၊ ပိုးကမ္ဘာ၊ လူလုပ်မြစ်တစ်စင်း၊ ရှန်ဟိုင်း(သို့မဟုတ်) အမြင့်ပျံ၊အမြင့်ပြိုင်၊ သုတ်သုတ်မြန်မြန် ရန်ကုန်အပြန်စတဲ့ ဆောင်းပါး ၁၂ပုဒ်...
မောင်ရစ် – ၈၈ အနှစ် ၂၀ (အခန်းဆက်များ) ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း
General Saw Maung (1928 – 1997) ၈၈ အနှစ် ၂၀ (အခန်းဆက်များ) ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ (ဗိုလ်စောမောင် – ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် ငါတို့ စစ်တန်လျားပြန်မယ်) မောင်ရစ် သြဂုတ် ၂၀၊ ၂၀၀၈ အဲဒီ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလည်း ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ပြီး သိပ်မကြာဘူး၊ သူတဦးတည်းပဲ သူ့အိမ်ပြန်သွားရတယ်။ စစ်သားတွေကော သူ့နောက်က ဗိုလ်ချုပ်တွေကော စစ်တန်းလျား ပြန်တဲ့လမ်း ပျောက်ကုန်ကြလို့လား မသိဘူး၊ နေပြည်တော်ကွက်သစ်မှာ သမ္မတအိမ်တော်တို့၊ ၀န်ကြီးချုပ် အိမ်ယာတို့ ဆောက်နေကြလေရဲ့။ စစ်တပ်ဆိုတာကတော့ ဘာလုပ်လုပ် စစ်တိုက်သလိုပဲ လုပ်တာပါ။ မနိုင်တဲ့ စစ်ကို မတိုက်ဘူး။ ဥပမာ – နာဂစ်မှာ လူတွေ အလုံးအရင်းလိုက် သေကျေ ဒုက္ခရောက် ဘ၀တွေ...
နိုင်ငံ ၈နိုင်ငံမှ ပန်းချီဆရာများ ပြသတဲ့Kumudra waves အမည်ရတဲ့ ပန်းချီပြပွဲ K (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၉ ၊ ၂၀၁၈ Artist Mano V Delhi(india)မှ စီစဉ်ပြီး နိုင်ငံ ၈နိုင်ငံမှ ပန်းချီဆရာများ ပါဝင်ပြသတဲ့ Kumudra waves အမည်ရတဲ့ Worldwide Movement အဖြစ် ပြသတဲ့ International Art Exhibition အနုပညာပြပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ဗိုလ်တထောင် မြို့နယ် ၄၃လမ်း(အောက်) အမှတ် ၁၀၁ ဒုထပ်ရှိ 43 Art Galler y မှာ ဇူလိုင် ၇ ရက်မှစတင်ကာ ၉ ရက်နေ့ထိအောင် ပြသ လျက်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ အနုပညာပြပွဲမှာ မြန်မာ၊...
ဂျူနီယာဝင်း – သတင်းဖြစ်ပွားမူများ
ဂျူနီယာဝင်း – သတင်းဖြစ်ပွားမူများ (အတွေးအမြင်မဂ္ဂဇင်း၊ ဇူလိုင် ၂၀၁၈) မိုးမခ၊ ဇူလိုင် ၈၊ ၂၀၁၈ (James Glen Stovell (ဂျိမ်းစ် ဂလန် စတုိုဗယ်) ရဲ့”Journalism“ (သတင်းစာပညာ) လုို့အမည်ပေးထားတဲ့ စာအုပ်က အပိုင်းတချူိ့ကုို သင့်လျော်သလုို ဘာသာပြန်တင်ပြထားတာပါ။ သူ့ရဲ့အာဘော်အတုိုင်း ဘာသာပြန်ထားသောလည်း စာရေးသူဖြည့်စွက်ထားတာတွေကို ကွင်းစကွင်းပိတ်နဲ့ လုပ်ပေးထားပါတယ်။) (သည်နေရာမှာ သူက သတင်းတွေဖြစ်ပွားမူ တွေကုို တပုိုင်းစီ ရှင်းသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်၊ တစ်ခုခု ဖြစ်တယ် ဆုိုပါတော့တဲ့။ ဒါကုို သတင်းလုို့သတ်မှတ်မယ် မသတ်မှတ်ဘူး။ ဘယ်လုိုအရာမျိူးကုို သတင်းပုံစံဝင်တယ် စသည်ဖြင့်ကုို သူက ရှင်းပြသွားတာပါ။ တခါတရံမှာ လူတွေက အချက်အလက်မှန်သမျှ တင်ပြနုိုင်သမျှကုို သတင်းလုို့ယူဆကြပါတယ်တဲ့။ ဒါကုို သူ့စာအုပ်မှာ...
“Memories of 1991” Art Exhibition – Gallery 65မှာ ၅ရက်ကြာ ပြမယ်
“Memories of 1991” Art Exhibition – Gallery 65မှာ ၅ရက်ကြာ ပြမယ် K (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၈၊ ၂၀၁၈ “Memories of 1991″အမည်ရတဲ့ စုပေါင်း ပန်းချီလက်ရာပြပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ဒဂုံမြို့နယ် ယောမင်းကြီးလမ်းအမှတ် ၆၅ရှိ Gallery 65မှာ ဇူလိုင်လ ၇ ရက်မှ ၁၁ ရက်ထိ ပြသသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ အဆိုပါ ပြပွဲမှာ ပါဝင်ပြသတဲ့ ပန်းချီဆရာများကတော့ ကျော်ကျော်၊ လှဘုန်းအောင်၊ မြင့်အောင်၊ မျိုးညွှန့်ခင်၊ ဌေးလွင်၊ ခင်မောင်ဇော်၊ ကျော်အာကာတို့ဖြစ်ပြီး အဆိုပါပန်းချီဆရာတို့ရဲ့ပန်းချီလက်ရာ ၅၀ကျော်ကို ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင် ၇ရက်မှ ၁၁ရက်ထိ ၅ရက်ကြာပြသသွားမယ့် “Memories of 1991” ပန်းချီပြပွဲကို နေ့စဉ်ပြပွဲချိန်အတွင်း...
ဆိုလာစနစ်ကို စတင်မိတ်ဆက်ပေးတာ ဘယ်သူလဲ ဂျူနီယာဝင်း၊ စွယ်စုံကျမ်းမိတ်ဆက်၊ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၈၊ ၂၀၁၈ ဆိုလာစနစ်ဆိုသည်မှာ နေကနေလာသော ရောင်ခြည်များကို စွမ်းအင်ဖြစ်အောင် ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ် သည်။ ဆိုလာပြားများသည် ထိုသဘောတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလာ = Solar ဆိုတာ နေရောင်ခြည်ဖြစ် သည်။ ဆိုလာပြားများသည် နေကလာသော ရောင်ခြည်များကို ရယူသော အပြားများဖြစ်သည်။ ထိုဆိုလာပြား များကို ခေါင်းမိုးပေါ်တွင် ထပ်ဆင်ထားပါကာ နေရောင်ခြည်ကို တိုက်ရိုက်ရယူက ထိုစွမ်းအင်ဖြင့် အိမ်အတွင်းရှိ လျှပ်စစ်မီး ၊ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်များကို အသုံးပြုလို့ရလေသည်။ ပုံတွင် ဆိုလာပြားများကို အိမ်ခေါင်းမိုးပေါ်တွင် တပ်ဆင်နေပုံ။ ပုံတွင် ဆိုလာပြားများကို တပ်ဆင်ထားသော အိမ်ကလေး။ ထို့ကြောင့် မီးပျက်သည့်အခါ ဆိုလာ ပြားများကြောင့် မီးလင်းရုံမက တီဗီတို့ဘာတို့လည်း...
ကာတွန်း Lai Lone – ခွန်ပြီးတော့ ရှစ်
ကာတွန်း Lai Lone – ခွန်ပြီးတော့ ရှစ် (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၇၊ ၂၀၁၈ Tags: Lai Lone Related posts No related posts.
ကာတွန်း OKKW ရဲ့ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဈေးရုံကြီး
ကာတွန်း OKKW ရဲ့ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဈေးရုံကြီး (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၇၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း OKKW Related posts ကာတွန်း OKKW ရဲ့ ခေတ်နှစ်ခေတ် (0) ကာတွန်း OKKW ရဲ့ အဘတို့ ဆေးရုံ (0) ကာတွန်း OKKW ရဲ့ အဖျားရှူးနေတယ် … (0) ကာတွန်း OKKW ရဲ့ မိုက်တယ် … မိုက်တယ် … မိုက်ဆဲ … (0) ကာတွန်း okkw ရဲ့ မအားလပ်သူကြီး … (0)
Page3of 909«12345...909»